‘वान अप अन वाल स्ट्रीट’ (One up on Wall Street)काे पुस्तक सारांश - Lekhapadhi Uncategorized : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी १४ आश्विन २०७८, बिहीबार ०४:१५ मा प्रकाशित
लगानी र अर्थ सम्बन्धि पिटर लिन्चद्वारा लिखित पुस्तक ‘वान अप अन वाल स्ट्रीट’ (One up on Wall Street)काे सारांश !!
अध्याय ३ः यो जुवा हो, अथवा के?
ऋणमा लगानी गर्नु वा कम्पनी अथवा स्टकमा लगानी गर्नु बीचको फरक बुझ्नु महत्वपूर्ण छ।
बण्ड, मनि मार्केटजस्तोमा लगानी गर्नु ऋणका प्रकार हुन् जसलाई ब्याज भुक्तानी गरिन्छ। विगतमा ऋण उपकरणहरुले ५ प्रतिशतभन्दा कम मुनाफा दिएको रेकर्ड छ। बण्डमा तपाई स्पेर परिवर्तनको निकटतम श्रोतभन्दा बढी केही होइन। जब तपाईले कसैलाई पैसा सापटी दिनुहुन्छ, तपाईले आशा गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको त्यसलाई ब्याजसहित फिर्ता पाउनु हो।
स्टकमा लगानी गर्नु भनेको निश्चयपनि ऋणमा लगानी गर्नुभन्दा नाफामुलक हुन्छ। सन् १९२७ देखि साधारण स्टकहरुले वार्षिक औषतमा ९.८ प्रतिशत नाफा दिएको रेकर्ड छ। स्टकमा लगानीकर्ता असीमित फाइदा छ किनभने तपाई समृद्ध र फैलिँदो व्यवसायको पार्टनर हुनुहुन्छ।
स्टकहरु बण्डभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन्। यहाँ धेरै कम्पनीहरु छन् जुन सूचीबाट बाहिरिसकेका छन्। कम्पनीहरुको भाग्य बदलिन्छ, ठूला कम्पनीहरु साना बन्दैनन् भन्ने कुनै निश्चित छैन। सही स्टक गलत समय र गलत मूल्यमा खरिद गर्दा तपाईलाई ठूलो घाटा लाग्न सक्छ।
बण्डहरुमा लगानी गर्नु पनि पूर्ण रुपमा जोखिमरहित भने छैन। उदाहरणको लागि, जब ब्याजदर बढ्छ, बण्डको मूल्य घट्छ। त्यसैले, तपाईले कम ब्याज स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिस्काउण्ट बण्ड बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ।
दुर्भाग्यवश, अझैपनि धेरैले स्टकमा लगानी गर्नु जुवा खेल्नु हो भन्ने मान्छन्। यदि तपाईलाईै आफुले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन र तपाईसँग सीप र लगानशीलता छैन भने यो जुवा हो।
‘मेरो लागि, लगानी एक जुवा मात्र हो जसमा तपाई बाधाहरुलाई आफ्नो पक्षमा झुकाउनको सक्षम हुनु हो।’
अध्याय ४ः मिरर टेष्ट पास गर्नु
कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुअघि, तीन कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छः १) के मसँग घर छ? २) के मलाई पैसा चाहिन्छ? ३) स्टकमा सफलता ल्याउनका लागि के मसँग व्यक्तिगत गुण छ?
१) के मसँग घर छ?
‘मानिसहरु रियल स्टेट मार्केटमा पैसा कमाउछन् र स्टक मार्केटमा पैसा गुमाउछन् त्यसमा कुनै आश्चर्य छैन। उनीहरु घर खरिद गर्न महिनौँ लगाउँछन् र स्टक छनोट गर्न केही मिनेट। वास्तवमा, उनीहरु राम्रो लगानी खरिद गर्नभन्दा राम्रो माइक्रोवेभ ओभन खरिद गर्न धेरै समय व्यतित गर्छन्।’
२) के मलाई पैसा चाहिन्छ?
तपाईले स्टकमा लगानी गर्ने पैसा पूर्ण रुपमा नाफाको हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईलाई आफ्नो बच्चाको शिक्षाको लागि दुई तीन वर्षमा पैसा तिर्नुपर्छ भने त्यो पैसा स्टकमा नराख्नुहोस्।
‘त्यो पैसा मात्र लगानी गर्नुहोस् जसलाई तपाईले गुमाउनु भएपनि तपाईको अदृष्य भविष्यमा दैनिक जीवनमा कुनै नोक्सानी नहोस्।’
(मेरोलगानी बाट साभार )